Giant Bear Claw / Hercules Shrub - Zvimwe Zvinotyisa
Herkulesstaude inozivikanwawo pasi pezita rokuti Riesenbärenklau kana Bärenkralle. The Giant Bear Claw inobva kumhuri yemiti yemabel uye inobva kuCaucasus. Kwekutanga, chimiro che 1985 chakaonekwa muEurope.
I Hercules shrub inogona kusvika kusvika pakukura kusvika mamita matatu. Simba riripo rakasviba rakaonekwa uye rine vhudzi rakanaka rinowanikwa pamiti yose.
Iyo yakareba yegate iri maviri kusvika kune masentimita gumi, zvichienderana nehuwandu hwenyika yacho. Mavara mashizha e giant hogweed chaizvo ane urefu hwemita mita. Iyo yakareba maruva maruva kazhinji inowanikwa yakareba ye 30-50 centimeters. A Hercules shrub inogona kuva neChNUMX single maruva.
Nguva inoyerera inobva munaJune kusvika pakupera kwaJuly. Muchena mutsvuku ane hupamhi hwakareba hwe 2 centimita uye hukura zvakaparadzana zvakaperera kumusoro. Sezvo mashizha machena ane mvere akafanana chaizvo nemakumbo emhuka dzebere, chimiro chave chainzi Bärenklau nekuda kwechikonzero ichi.
Mushure mokunge mbeu yezvipfeko yemichero yakaumbwa, muti wacho unofa. Kana muti wacho usingabereki, unogona kurarama nyore kwemakore akawanda. Mbeu dzeHerkulesstaude dzinokura zvikuru kwemakore.
Iyo Hercules shrub haina kukura muvhu weasidi. Kana zvisina kudaro, iye anonyadzisa zvikuru uye anongoda zuva duku chete kuti ararame kwemakore.
Iyo giant hogweed inonzi inonzi furocoumarins, iyo inokonzera kugadzikana kweganda mushure mekugunzva kweganda.
Kunyangwe kusangana kwenguva pfupi nemashizha kunogona kuve kwakakwana kudzikinura ganda zvikuru. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, kunyange blister inogona kuumba paganda. Izvi zvinorwadza uye zvinononoka uye zvinogona kukonzera kutanga uye yechipiri kuchipisa.
Mukuwedzera kune kutsamwa kweganda, uye kuchema kwekuchema kunogona kuvawo nekuguma kwefivhiri, zvinetso zvepakati uye swe sweat. Izvi zvinogona kutora mavhiki.
Paunosangana nemiti yacho, unofanira kushambidza zvakanyatsokonzera ganda nemvura uye sese. Kana kushungurudzwa kweganda kwakaitika, dermatologist inofanira kuongororwa pakarepo kuitira kuti kurapa kwakakodzera kunogona kushandiswa.
Kusiyana neGiant Bear Claw, Meadow Hogweed inowanikwa kuEurope. Kunyanya kunowanikwa Giant Bear Claw pamabhangi nemigodhi uye inokura zvakanakisa kune ivhu rakaoma, ivhu rakaoma. Maziso, zvose zvirimwa zvinotarisa zvakafanana.
Kana mbeu yacho ichiri muduku, hapana ngozi yekuisvibisa. Kazhinji mashizha anowanzoshandiswa semombe yekudyisa. Zvisinei, mhuka haifaniri kuwana zvakawanda, nokuti inogona kukonzera kushungurudzwa kweganda. Zvichienderana nehukuru hwemuti wechidiki, shinde inogona kudyiwa yakasvibirira, kana kubikwa kuti iite compote.
Ambrosia - Inotyisa mbeu
Zvitsva zvinokonzera vana
Orchids kuchengetedza - Ungarimbura sei orchids yavo ...
Zviri nyore kuchenesa mapuranga emvura | chirimwa
Indoor plant for low light | chirimwa
Indoor plants - tsvina pamiti
Coloring page peji